कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो कुनै हालतमा छाडिन्न : महामन्त्री कोइराला
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भएकोले कुनै हालतमा छाड्न नसकिने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हामी आफ्नो भूभागको एक इन्च पनि नछाड्ने भनी
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। आज बिहान ९ बजेको लागि तय गरिएको सचिवालय बैठक केही तयारी बाँकी रहेको भन्दै पछि सारिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ मंसीरको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको जानकारी
प्रदेश सरकारसँग स्रोत र साधनको अभाव छैनः मुख्यमन्त्री राई
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको विकासको लागि प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत र साधन रहेको बताएका छन्। भोजपुरको पिखुवा खोलामा पक्की पुल र भोजपुर रंगशालाको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, “हामीसँग बजेटको अभाव छैन तर थालिएका काम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउनु चुनौती
१८ महिनापछि पोलिटब्युरो गठन गर्ने तयारीमा नेकपा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पोलिटब्यूरो गठन गर्दै छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार ४ बजे बस्ने सचिवालय बैठकले पोलिटब्युरो गठन गर्न लागेको हो । पार्टी एकता भएको १८ महिना पूरा भइसक्दा पनि नेकपाको एकताले अझै पूर्णता पाएको छैन । नेकपाको पार्टी विधानमा नै कुल केन्द्रीय
समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी,सरकार छोडनेबारे छलफल
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको वैठक पुरानो बानेश्वरस्थित ॐ साइ पार्टी प्यालेसमा जारी छ । बिहीवार संघीय परिषदको वैठकपछि शुक्रबार केन्द्रीय समितिको वैठक बसेको हो । वैठक भोलि सकिने छ । वैठकमा पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरूले गरेका कामकाजको विवरण प्रस्तुत भइरहेको समाजवादी पार्टीका
कालापनी विवाद नेपाल र भारतले सम्झौताबाट टुंग्याउनु पर्छ: चीन
काठमाडौं । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी लिम्पयाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र पारेपछि सुरु भएको नेपाल र भारतबीचको विवादमा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको छ। नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा गाभेपछि चीनले बिहिबार पहिलोपटक प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल र भारतले यो विवाद मैत्रीपूर्ण परामर्श
सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेर भूमि फिर्ता हुँदैनः सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भूमि फिर्ता गर्न सरकारले चाँडो कूटनीतिक पहल गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार धनगढी विमानस्थलमा सन्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको
निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अवकाश अवधि अब स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सरह
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा अवधि ६० वर्ष कायम हुने भएको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निजामती सेवाको कर्मचारीहरुको सेवा अवधिको उमेर हद पनि ६० वर्ष पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो। निजामती सेवाको कर्मचारीहरूको पनि अवकाश अवधि स्वास्थ्य सेवाका
बाबुरामको १७ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन , समाजवादी पार्टी असफल भए मुलुक नै असफल हुने निष्कर्ष
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकीकृत भएर बनेको समाजवादी पार्टी असफल भए मुलुक नै असफल हुने निष्कर्षसहितको १७ बुदें राजनीतिक प्रतिवेदन पहिलो परिषद् बैठकमा पेस भएको छ। पूर्वप्रधानमन्‍त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बिहीबार सुरु भएको परिषद् बैठकमा यस्तो प्रतिवेदन
स्थानीय तहको ४८ पदमा २८१ जनाको उम्मेदवारी,कहाँ–कहाँ हुँदै छ चुनाव
काठमाडौं। स्थानीय तहमा रिक्त ४८ पदका लागि २८१ जनाको उम्मेद्‌वारी परेको छ। ३५ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा रिक्त ४८ पदका लागि २८१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगले बुधवार स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि मनोनयन दर्ताको समय तय गरेपछि ३५ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा रिक्त ४८ पदका लागि २८१ जनाको उम्मेद्‌वारी
राप्रपाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बुद्धिमान तामाङलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । वासिङ्टन डिसीमा आउँदो डिसेम्बर ४–६ सम्म हुने इन्टरनेशनल डेमोक्र्याटिक युनियन फोरम र प्रवासी नेपाली एकता समाजले गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा
स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता आज
काठमाडौं । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज स्थानीय तहहरुमा प्रमुख तथा वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले जनाए अनुसार आज विहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय दिइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा
वंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त
काठमाडौं। नेपाल भ्रमणमा रहेका वंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद र समकक्षी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच आज उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ । वंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदले आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।वंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदले समकक्षी भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन,
डा.केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले डडेल्धुरामा अनशनरत डा .गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकारहरुसंग डा. केसीसँग वार्ता गरेर उनका मागहरु पुरा गर्न आग्रह गरेका
सिमा विवाद विरुद्ध नेबि संघको प्रर्दशन (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कालापानी नेपालको भूमि भएकाले तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै नेवि संघले सडक आन्दोलन जारी राखेको छ । मंगलबार बिहान नेवि संघ काठमाडौंको अगुवाईमा चावहिलस्थित पशुपति क्याम्पसका विद्यार्थीले लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपाली भू–भाग भारतले कब्जा गर्न लागेको भन्दै खवरदारी आन्दोलन
नेकपाले लगायो केन्द्रीय निकायको टुंगो , अनुशासन आयोगको प्रमुखमा बोहरा
काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोक्दै केन्द्रीय निकायहरुको एकीकरणको काम सम्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सकिएको नेकपा सचिवालय बैठकले अनुशासन आयोगको प्रमुखमा अमृतकुमार बोहरालाई चयन गरेको छ। त्यस्तै सचिवमा अशोक रोकाय चयन भएका
नेकपा सचिवालय बैठक शुरू : मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ( प्रचण्ड ) बीच बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलपछि सोमबार नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको हो । बैठकमा पार्टी एकताको टुंगो लगाउने
गणेशमान सिंहको १०५ औं जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईयो
काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता एवं सर्वोच्च कमांडर लौहपुरुष गणेशमान सिंहको १०५ औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आज नेपाली कांग्रेसले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी गणेशमान सिंहको स्मरण गर्दैछ । आज विहान काठमाडौंको शोभा भगवतीमा
ठगी आरोप लागेका सुदूरपश्चिमका राज्यमन्त्री रावलको राजीनामा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आज राजीनामा बुझाएका हुन्। मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले रावलको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको बताए। रावल कञ्चनपुरस्थित जनज्योती
संसदीय समितिले बोलायो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई, सरकारको धारणा माग
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा छलफल गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको छ । सांसदहरुले अतिक्रमणको विषयमा छलफल आवश्यक भएको भन्दै समितिलाई दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई नै बैठकमा बोलाइएको हो । नेपालको भूभागलाई आफ्नो देशको
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पूर्वी पहाडको भ्रमणमा
काठमाडौं । नेपाली कांगेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश नम्बर १ का विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने भएका छन । पौडेल पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि प्रदेश नम्बर एकका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्कने भएका हुन । वरिष्ठ नेता पौडेल कार्तिक २६ गते मंगलवार मकवानपुरको हेटौडामा
पोखरामा कांग्रेसले बनायो तीन हजार ५५१ सदस्यीय प्रचार समिति,को कति बलियो ?
पोखरा । नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने कास्की क्षेत्र नं–२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि तीन हजार ५५१ सदस्यीय प्रचारप्रसार समिति गठन गरेको छ । कास्की क्षेत्र नं २ क्षेत्रीय समितिले आयोजना गरेको भेलाले पार्टीका जिल्ला सभापति कृष्ण केसी संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो
आलम प्रकरण : आलम अदालतमा उपस्थित
काठमाडौं । १२ वर्ष पहिलेको सामूहिक हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको अदालती बयान आज हुँदैछ । प्रहरीले आलमसहित ११ जनाविरुद्ध १८ कात्तिकमा जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत रौतहटमा बयानका लागि आलमलाई बिहान सवा १० बजे नै प्रहरीले उपस्थित गराएको
प्रदेश प्रमुखले लिए सपथ
काठमाडौं। सातै प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बिहान एक समारोहका बीच सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । श्रेष्ठमाथि पदीय आचरण अनुकुल काम नगरेको, बैंकहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको लगायतका आरोप लागेको छ । आज बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा श्रीराम पौडेल, रामजी
आलम प्रकरण : रौतहट हत्याकाण्डमा ११ जनाविरूद्ध आज मुद्दा दर्ता हुँदै
काठमाडौँ । १२ वर्ष अघि रौतहटमा नरसम्भारमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमसहित ११ जनाविरुद्ध आज रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदैछ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर गर्न लागेको हो। अफतावमाथि
थुनछेक बहस नसकिँदा महरा आज पनि थुनामै
काठमाडौँ बलात्कार प्रयासको अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा आज पनि थुनामै बस्ने भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहस नसकिएपछि भोलि पुनः बहस हुने गरी आजको इजलास स्थगित भएको छ । महराको इजलासमा बयान सकिएपछि सुरू भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट चार जनाले बहस गरे
मन्त्रिपरिषद्को बैठक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपतिमा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्ति
आजै दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपतिमा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्ति गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक बोलाएका छन्। बैठक प्रधानमन्त्री निवास
उपनिर्वाचनमा नेपाली सेनासहित ४ वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने
काठमाडौं, १५ कार्तिक–आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली सेनासहित ४ वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गरी उपनिर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ । उपनिर्वाचनको
मदन भन्डारी फाउन्डेसनद्वारा ३ दिने जबज कक्षा संचालन
काठमाडौं । मदन भन्डारी फाउन्डेसन काठमाडौं जिल्ला कमिटीले भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि बिकास बैंकको तालिम केन्द्रमा ३ दिने जबज कक्षा सञ्चालन गरेको छ। कार्तिक १ गतेबाट शुरु भएको कक्षाको उद्घाटन फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष उषा किरण भन्डारीले गरे । सो कक्षामा फाउन्डेसनका जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु तथा
कुल पोष्ट : 575